Muqdisho : HN :–Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xassan Sheekh Max’uud ayaa maanta Muqdisho dib ugu soo laabtay kaddib markii uu soo gunaanaday socdaal uu ku tagay dalka Itoobiya.
Xasan Sheekh iyo wafdigiisa ayaa magaalada Mekelle ee dalka Itoobiya kaga qaybgalay xuska 40-guuradii kasoo wareegtay markii ururka Tigray People’s Liberation Front (TPLF) uu bilaabey dhaqdhaqaaqii milateri ee ahaa is-beddel doonka siyaasadeed. Ururka TPLF ayaa ka tirsan isbahaysiga EPRDF ee haya talada dalkaas.
Ugu dambeyn, madaxweynaha ayaa intii uu ku sugnaa Itoobiya wuxuu kulan la qaatay madaxdii kale ee lagu casuumay munaasabadda oo ay ka mid yihiin; madaxweynayaasha Itoobiya, Rwanda, Sudan iyo sidoo kale ra’iisul wasaarayaasha dalalka Itoobiya, Jabuuti iyo Uganda oo qaarkood ay ciidan kaga sugan yihiin Somalia.
Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Xasan Sheekh ayaa waxaa kusoo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Muqdisho guddoomiyaha baarlamanka Somalia, Maxamed Sh eekh Cismaan Jawaari, ra’iisul wasaare ku xigeenka dalka, Maxamed Cumar Carte, xubno wasiirro iyo xildhibaanno isugu jiray.